Diso faly loatra noho ny fandresen’ny ekipam-pirenena Malagasy an’ny Hirondelles Burundi, amin’izao ady baolina kitran’ny “Coupe d’Afrique des Nations” izao izy. Tsahivina fa ny minitra faha- 76, teo amin’ny kianjan’i Alexandrie, Egypte no nahafaty baolina tamin’ny alalan’ny “Coup franc” nodakan’i Marco Ilaimaharitra, ny ampitso alin’ny fetim-pirenena. Ny loharanom- baovao iray nilaza fa nijery baolina ilay zaza ary vokatry ny fahatairany fa nahafaty baolina ny ekipam-pirenena Malagasy dia nihoraka mafy izy ary nijanona tampoka tamin’izay ny fony. Voalaza hatrany fa mpankafy taranja baolina kitra tanteraka ireo manodidina sy ny fianakaviany. Loharanom-baovao hafa kosa anefa nilaza fa teo koa ny orakoraky ny manodidina izay anisan’ny nanaitra azy ka nampiakatra ny tosidrany ary voalaza fa nahafaty azy. Ny faran’ny herinandro teo no nentina nihazo ny Faritra Matsiatra Ambony izay misy ny fasan-drazany ny vatana mangatsiakan’ity zaza ity. Marihina fa ankizy latsaky ny 7 taona ity nindaosin’ny fahafatesana teo Anosibe ity.